राजाधानीमा रहेको अमेरिकी दूतावासबाहिर बम विस्फोट, के छ क्षतिको अवस्था ? भिडियाेसहित — Sanchar Kendra
राजाधानीमा रहेको अमेरिकी दूतावासबाहिर बम विस्फोट, के छ क्षतिको अवस्था ? भिडियाेसहित
काठमाडाैं । राजधानीस्थित अमेरिकी दूतावास बाहिर बम विस्फोट भएको छ। घटनाबारे विस्तृत विवरण नआए पनि अमेरिकी दूतावास रहेको क्षेत्र बाहिर विस्फोट भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले ब्रेक गरेका छन्।
यो चीनको खबर हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्‍धृत गर्दै राजधानी बेइजिङमा विस्फोटको आवाज सुनिएको र ठूलो मात्रामा धुवाँको मुस्लो उडेको उल्लेख गरेको छ। प्रहरी तथा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सूचना संकलन भइरहेकोले तत्काल केही भन्न नसकिने जनाएको एपीको समाचारमा उल्लेख छ।
चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले एक महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएङ्को जनाएको छ। आफ्नो शरीरमा मट्टितेल छर्किन खोजेकी ती महिलालाई प्रहरीले आत्मदाह गर्न खोजेको शंकामा अमेरिकी दूतावासबाहिरबाट नियन्त्रणमा लिएको ट्विट गरेको छ।
घटनामा केही व्यक्ति घाइते भएको हुनसक्ने प्रत्यक्षदर्शीले बताएको पाकिस्तानको जिओ टिभीले जनाएको छ। चीनको युनटक्स अनलाइनले विस्फोट भएको भनिएको क्षेत्रको फोटो पोस्ट गरेको छ जहाँ धुवाँको मुस्लो उडेको देखिन्छ। ट्विटरमा पोस्ट भएको एक भिडियोमा पनि धुवाँको मुस्लो देखिएको छ।
हङकङ प्रि प्रेसले घटनाको भिडियो पनि राखेको छ जहाँ मानिसहरू मुस्लो उडेको क्षेत्र नजिकै कराइरहेको र यताउता दौडिरहेकोजस्तो देखिन्छ। यसैबीच उता फिलिपिन्सी सरकारी सेना र माओवादीबीच फेरि युद्ध सुरु भएको छ । शान्ति वार्ताप्रति सरकार गम्भीरन भएको भन्दै युद्धविराम भंग गरेको माओवादीले सशस्त्र संघर्षलाई अगाडि बढाएको छ ।
फिलिपिन्सको उत्तरी लुजोन कमाण्ड रहेको कार्डिलेरामा सरकारी सैनिक र माओवादी सेनाबीच तीन घण्टा लामो भिडन्त भएको छ । उक्त भिडन्तमा परी ३ सरकारी सैनिक कमाण्डरको मृत्यु भएको छ भने दर्जनजति घाइते भएका छन् ।
फिलिपिन्स माओवादीको आफ्नै आधिकारिक वेभसाइटलाई उदृत गर्दै रेड स्पार्क वेभसाइटले जनाएअनुसार सरकारी सशस्त्र सेनाको उत्तरी लुजोन कमाण्डको हेडक्वाटर (नोल्कोम) का अनुसार १५ जुलाइमा भएको माउन्टेन प्रान्तको टैटबोन, बेसओ र सैटिओ दंडनाक क्षेत्रलाई आधार बनाएर बसेको सरकारी ८१ औं बटालियनमाथि माओवादीहरूले आक्रमण गरेका हुन् ।
जनवादी सत्ता स्थापनाको लागि पचास वर्षदेखि जारी फिलिपिन्सको माओवादीहरु युद्धमा छन् । सन् १९६९ देखि सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजेको माओवादी आन्दोलन ६ महिनाअघिसम्म सरकारसँग वार्ता भएको थियो ।
सरकार वार्ताप्रति गम्भीर नबनेको भन्दै माओवादीहरूले युद्धविराम भंग गरेको घोषणा गरेका थिए । यो भिडन्तमा माओवादीलाई ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । यो शान्ति वार्ता भंग भएपछिकै ठूलो सफलता हो ।